Usephokophele ubukapteni emkhunjini omkhulu - Ilanga News
Home Izindaba Usephokophele ubukapteni emkhunjini omkhulu
Usephokophele ubukapteni emkhunjini omkhulu
Watshelwa nguyise ukuba ashiye phansi eDUT kufuneka imali
USEQASHWE yinkampani yaseGermany njengeJunior Navigation Officer emkhunjini othutha izimpahla iDietrich Olderndorff uMnu Thobani Sithole kanti ngaphambi kwalokho uke wasebenza kwiHelga Oldendorff.
UQHAMUKA kobukhulu ubunzima bokweswela imali yomqasho ngesikhathi eseyoqala ukufundela umsebenzi uMnu Thobani Sithole (23) osebheke esicongweni empilweni yakhe, kwazise ungowokuqala osemncane wakuleli ukusebenza njengomshayeli emkhunjini omusha ceke, iDietrich Oldendorff, wenkampani yaseGermany, i-Oldendorff Carriers.
Wabhalisela imfundo ephakeme eDurban University of Technology (DUT), ngemali ayinikelelwa kwamasipala waseMsinga lapho edabuka khona uMnu Sithole okumanje uqashwe kulo mkhumbikazi othutha izimpahla njengeJunior Navigation Officer.
Le nsizwa izalwa esigodini saseMahedeni, eMsinga, kanti idalule ukuthi uthando lokusebenza olwandle lokheleka isavakashe kabili nje vo endaweni enamanzi agxumagxumayo njengoba ebizwa kanjalo amagagasi ezindaweni zasemakhaya.
Wayevakashe ehamba nesikole ayefunda kusona.
Ukhule kanzima njengoba unina washona esemncane, basala noyise obengasebenzi, bewu-5 kwabo. Usizwe wukuphasa ngamalengiso umatikuletsheni eMsinga High School ngo-2014 okwenze umasipala waseMsinga wamnika imali yokubhalisela ukufundela umsebenzi eDUT.
Wenze izifundo zeNational Diploma in Maritime Studies, manje eseyibizwa nge-Advanced Diploma in Nautical Studies.
Uthi ngemuva kokuthathwa eDUT, uyise wamtshela ukuba ashiye phansi imfundo abuyele ekhaya ngoba eswele imali yokukhokhela indawo yokuhlala.
Uyise ushone esafisa ukumjabulisa amakhele umuzi
“Ngikhumbula kahle ukuthi ngemuva kokuba umasipala wase-Msinga unginikelele ngemali yokubhalisa eDUT, ngafika khona zayima emthumeni ngingasenayo indawo yokuhlala.
“Kwakudingeka u-R2100 okwathi uma ngifonela ubaba ngiyicela, wavele wathi mangitshathe imithwalo yami ngibuyele ekhaya. Amazwi akhe nanamhlanje ngisawakhumbula ngoba nangaso leso sikhathi ekhaya bekuphilwa ngemali yesibonelelo yezingane ezingelamayo,” esho.
Uthi kumphathe kabuhlungu ukudlula emhlabeni kukayise ngasekuqaleni konyaka odlule, engasayibonanga impumelelo yakhe, aphinde akwazi nokumenzela izinto ezinhle njengokumakhela umuzi.
Ukholelwa ekutheni ukusebenza kanzima ezifundweni zakhe eDUT yikhona okumenze washeshe wafinyelela empumelelweni njengoba esesebenzela inkampani yaseGermany.
“Nginezinyanga eziwu-6 ngise-DUT ngahlomula ngendondo yokuba yiBest Maritime Student, kwazise bengiphasa kahle kakhulu. Lokhu kuholele ekutheni ngihlabane ngomfundaze wehhovisi likandunankulu waKwaZulu-Natal. Ngisho sengiqeda izifundo zami ngiphase kahle. Phela izifundo zalo msebenzi zinesikhwele, kazifuni ukuqhathaniswa nezinye izinto,” esho.
Uhlabane ngemiklomelo yokuvelela esese-DUT
Eqeda izifundo zakhe kulesi sikhungo, uphase ngeCum Laude waphinda wahlabana ngeDean’s Merit Award.
Ube eseqedela ukuqeqeshwa kwakhe kwiNational Cadet Programme, okuwuhlelo olungaphansi kweSouth African International Maritime Institute (SAIMI), okuyilapho ekwaze ukusebenza nasemkhunjini, iSA Agulhas, okwenze wahambela amazwekazi kubalwa i-Antarctica, i-Asia, i-Europe ne-Australia.
Ngesikhathi esasebenza ngaphansi kweSAIMI, ungomunye wabakhethwe ukuyomela iNingizimu Afrika engqungqutheleni ebeyingoMfumfu (October) nyakenye eChina. Kule ngqungquthela bekukhulunywa ngokuthuthukiswa kwezomnotho zasolwandle kanti beyibanjelwe eFujian Institute of Oceanography, eXiamen, khona eChina.
“Ukuba ngaphansi kwale nhlangano kungisize ngakwazi ukufunda ukusebenza nabantu abehlukene futhi abaphuma ezindaweni ezahlukene.
“Lokhu kungincede kakhulu ukuqashwa ngezinye izinkampani ngoba bese kukhona ukuqeqesheka enginakho. Namanje kulo mkhumbi engisebenza kuwona yimina kuphela owaseNingizimu Afrika kanti sibabili nje vo abamnyama.
“Nakweminye imikhumbi esengike ngasebenza kuyona bekuke kwenzeka ukuthi kube yimina kuphela omnyana ngiphinde ngibe mncane kunabo bonke abaqashwe lapho,” esho. Yize ethi ekuqaleni lokhu bekumsabisa kodwa usejwayele futhi iphupho lakhe elikhulu wukuba ngukaputeni komunye wemikhumbi emikhulu ethutha izimpahla ngolunye usuku.
Uqashwe abomkhumbi wase-Germany usakhiwa e-Japan
Uma echaza ngomsebenzi wakhe, uyaye ashayele umkhumbi amahora amane ehleli kwi-bridge, esikhundleni sikakaputeni, uma eqeda la mahora uyahamba ayosebenza amathathu esenza okwehlukile.
“Njenge-3rd officer, umsebenzi wami uma sengiqede amahora amane uyehluka njengoba ngibuye ngibhekelele ukuphepha kwabo bonke abasemkhunjini, ukuphepha kwawo umkhumbi, wukuqinisekisa ukuthi izimpahla ezilayishwayo zifakwa ziphinde zibekwe ngendlela, wukubhekelela ezokuphepha okuhlanganisa nezinto zokucisha umlilo, wukuqinisekisa ukuthi konke okudinga ukulungiswa kulungisiwe nokuqinisekisa ukuthi kakugibeli abantu abangafanele emkhunjini,” esho.
Isifiso sakhe esikhulu wukuthi zikhwele kuyena esekulo mkhumbi, iDietrich Olderndorff, aqashwe kuwona usakhiwa.
“Ngihambe eNingizimu Afrika ngo-Nhlolanja (February) ngalibangisa eJapan ngebhanoyi, kwazise umkhumbi ubupake khona ngaleso sikhathi. Ngifike ngasebenzela khona kanti ngizohaqwa wumkhuhlane okwenze ngabuyela kuleli ngaseku-pheleni kwenyanga edlule. Njenga-manje ngilungiselela uku-yojoyina lo mkhumbi eMalaysia, lapho engizowufica khona bese ngiqhubeka nomsebenzi,” esho.
Uzimisele ngokuvula ibhizinisi nokufundisa izingane zakwabo
Uthi njengoba esesesigabeni esiphansi nje, uhola u-R45 000
($2 500) ngenyanga. Uthi inkulu kakhulu imali emikhunjini ethutha uwoyela kanti nemithetho yokusebenza khona ibucayi.
Uthi uyafisa ukuba nesipiliyoni sokuyosebenza emkhunjini othutha uwoyela kanjalo nakwehamba ngaphansi kwamanzi (submarine). Phela uthi ufuna ukuba nesipiliyoni sokuthi kunjani ukusebenza nokuhlala ngaphansi kwamanzi.
Uma ekhuluma uzwakala njengomuntu onobuhlakani njengoba ethi uzimisele ngokuqala umndeni ngelinye ilanga, ngakhoke uyazi ukuthi ngeke akwazi ukuphila isikhathi eside ehlala olwandle kepha kumele acabangele ikusasa ukuthi yikuphi okunye angakwenza.
“Isifiso sami esikhulu wukuvula indawo yokudla esezingeni eliphezulu ngiphinde ngingene emabhizinisini okudayisa izindlu.
“Nginothando olukhulu kakhulu lwamabhizinisi futhi ngiyazi ukuthi ngizogcina khona. Okwamanje ngizosebenza ngokuzimisela, ngakhele izingane zakithi ikhaya, ngizifundise bese ngiqala owami-ke umndeni,” esho.
Nakhona ekushayeleni imikhumbi uthi ngeke ashiye engabizwanga ngoCaptain Sithole, ngoba uyafisa ukuthi abe yisibonelo esihle kubantu abasha baseNingizi-mu Afrika.
Uthi ngenxa yokuthi kunabantu abaningi abambuzayo ukuthi ufike kanjani lapho ekhona, usesungule i-youtube channel lapho egqugquzela khona aphinde afundise ngemisebenzi eminingi engenziwa kulo mkhakha.
Previous articlengebhe yokusondela kobusika nge-corona
Next articlebafuna uhulumeni angakhethi iphela emasini kwezobuciko